किन सधैँ अनिश्चित काठमाडौंका मतदाता ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
किन सधैँ अनिश्चित काठमाडौंका मतदाता ?
काठमाडौं । गाउँका मतदाता र सहरी मतदाताको मनोविज्ञान अलग हुन्छ । उनीहरू प्रभावित बन्ने मानक बिल्कुल भिन्न हुन्छ । गाउँका मतदाता नातागोता र इष्टमित्र जस्ता सामाजिक जालोभित्र रहन्छन् । त्यसैले उनीहरूको मत सधैं स्थिर हुन्छ । तर, सहरका मतादाता त्यस्ता सामाजिक जालोभित्र रहेका हुँदैनन् । त्यसैले सहरका मत सधैं अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्ता मत क्षणिक लहडको भरमा जता पनि बहन सक्छ ।
लौहपुरुषका रूपमा परिचित गणेशमान सिंहले सायद सहरको यो मनोविज्ञान बुझेका थिए । उनी आफ्ना मतदाताप्रति विश्वस्त थिएनन् । त्यसैले उनी निर्वाचन अवधिभर आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा बस्न छाडेर काभ्रेको बनेपा गएर बसेका थिए । ०४६ सालपछिका निर्वाचनमा यो अवस्था अझ झाँगिएर गएको देखिन्छ । यो खबर समाजशास्त्री शुरेश ढकालको भनाई उद्धृत गर्दै आजको राजधानीमा छापिएको छ।
२० वर्षपछि आह्वान भएको गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंको मेयरका लागि राष्ट्रिय दल र राष्ट्रिय व्यक्तित्वबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तर, योबीचमा २१ वर्षकी युवती रञ्जु दर्शनाले २३ हजार मत ल्याएर सबैलाई चकित बनाइन् । उनले निर्वाचित विद्यासुन्दर शाक्यको तुलनामा एकतिहाइ मात्र ल्याएकी हुन् । तर, माओवादी उम्मेदवारले जमानत पनि जोगाउन नसकेको यो निर्वाचनमा अर्का चर्चित उम्मेदवार तथा पूर्वसचिव किशोर थापाले भन्दा पनि रञ्जुले धेरै मत ल्याएकाले उनको चर्चा धेरै भयो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।